Bubata Fromgbọala Site na EU na UK | Importgbọ M Mbubata
Bubata Fromgbọala Site na EU na UK
Anyị bụ ndị ọkachamara na ndebanye aha UK site na iji Asambodo Nkwekọ.
Nwere ike ịzụta asambodo gị n'aka anyị ma debanye aha ya - ọrụ nkwụsị zuru ezu!
Na-ebubata ụgbọ gị na UK site na Europe?
Imirikiti ụgbọ ala anyị debara aha na Europe ka ndị nwe ha na-ebuga na UK ma ha adịlarị ebe a, naanị na-achọ nhazi ndebanye mbubata na Asambodo Nkwekọ, VCA na DVLA. Anyị nwere ike ijikwa usoro ịbugharị ụgbọ ala gị site na mba EU ọ bụla na UK ma ọ dị mkpa.
Anyị na-akwọkarị ụgbọ ala n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ ụgbọ ala ndị mkpuchi zuru oke, mana na-enyekwa mpịakọta ọrụ mbupu ọrụ sitere na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ. Mgbe ị na-agafe ụgbọ ala gị, edobere ya na n'ọtụtụ ọnọdụ, a ga-enyefe ya na ụlọ anyị, agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ahịa anyị na-ahọrọ ka enyefe ha ụgbọala ahụ ma jiri ọrụ anyị rụọ ọrụ ọ bụla nke DVLA chọrọ iji debanye aha ya ugbo ala. Nke a dabere na ọtụtụ ihe akọwapụtara ụgbọ ala yabụ egbula oge ịbịakwute ya ma ọ bụrụ na ị maghị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwọ ụgbọ ala mgbe ị bịarutere United Kingdom na naanị ịchọ ọrụ anyị maka ịme akwụkwọ. Biko lelee mkpuchi maka ịkwọ ụgbọ ala gị na United Kingdom. O nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma mana egbula oge ịbịakwute ya ma ịchọrọ ịchọ mkpuchi - anyị na-eji ọtụtụ ndị amụma mkpuchi nwere ike inyocha ụgbọ ala site na iji nọmba VIN
Otu ndị ọkachamara na-eme nke ọma na-eme ka ụlọ ọrụ a nwee nkwanye ùgwù. Ha na-edozi ihe niile n'egbughị oge ma mee ka ị mata n'ime usoro ahụ. Ha imekọ ihe ọnụ kwesịrị ịja mma na ha niile dịkwa mma! Enweghị akwa ụta na enweghị nchekasị! Daalụ Cargbọala M Bubata maka enyemaka gị! "
- Opel Zafira nke IE - Ireland
Ụgbọ ala gị erughị afọ iri?
Mgbe ị batara na UK, ụgbọ gị ga-ekwenye na ụdị nkwado UK. Anyị nwere ike ime nke a site na usoro akpọrọ nkwado ma ọ bụ site na nyocha IVA.
Bubata Usoro maka ụgbọ ala n'okpuru afọ 10
Cargbọ ala ọ bụla dị iche na ndị nrụpụta ọ bụla nwere ụkpụrụ nkwado dị iche iche maka inyere ndị ahịa ha aka site na usoro mbubata, yabụ biko jụọ ka anyị wee tụlee nhọrọ ọsọ ọsọ na ọnụahịa kachasị maka ọnọdụ gị.
Carsgbọ ala ndị aka ekpe si Europe ga-achọ mgbanwe ụfọdụ, gụnyere ndị nke ụkpụrụ ọkụ ihu iji zere ịcha ọkụ maka ọbịbịa na-abịanụ, ọsọ ahụ iji gosipụta kilomita elekere kwa elekere na ọkụ foogu azụ ma ọ bụrụ na ọ kwadobeghị nke ụwa niile. Anyị wuru ọtụtụ katalọgụ nke usoro na ụdị nke ụgbọ anyị butere wee nwee ike ịnye gị atụmatụ ọnụego ngwa ngwa nke ụgbọ ala gị ga-achọ.
Ezigbo ọkachamara na ezigbo nkwurịta okwu, ihe niile gara dịka nkwa oge na mkparịta ụka mbụ. Ezigbo ọrụ dị mma debe ya n'ụzọ a.
-2016 Volkswagen Golf 1.6 TDi, LHD si RO - Romania
Bubata Usoro maka ụgbọ ala karịrị 10 afọ
Ụgbọ ala si n'ime EU ndị gaferela afọ iri anaghị anabata nnabata. Nke a apụtaghị na ha achọghị IVA nwalee atụmatụ nnabata anyị. O yikarịrị ka ha ka ga-achọ mgbanwe iji gafee ule MOT - mana ọ na-eme ka ụzọ ndebanye aha ga-adị ntakịrị.
Kedu ihe ibubata ụgbọ gị gụnyere?
Na United Kingdom, ụgbọ ala ga-enwerịrị 'ụzọ' ma ha ga-achọ MOT iji gosipụta na ha kwesịrị maka nzube yana nchekwa.
Vehiclegbọ ala kachasị nwere ike ịchọ obere mgbanwe iji dozie usoro ọkụ iji hụ na ọkụ ahụ agaghị ekpuchi ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ. A na-achọkwa ọkụ ọkụ ikuku na United Kingdom, yabụ ndị a ga-achọ dabara ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ enweghị.
Agbanyeghị, mgbanwe niile na-adabere n'ụgbọ ahụ n'onwe ya.
Anyị enweela ngwa ngwa na ọrụ enyi na-arụ ọrụ site na mbubata ụgbọ ala m ma na-atụ aro ka ha mara maka njikwa akụkụ niile nke azụmahịa ha ...
-1997 Toyota Hilux, 2.4 Diesel, Green, Bulie na FR - France - Formergbọ ala UK mbụ
Ego ole bụ ụtụ mbubata mbubata ụgbọ si EU na UK?
Na-esochi njedebe nke oge mgbanwe Brexit, iwu dị iche iche na-emetụta maka ụtụ mbubata mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala na UK.
Ọ bụrụ na ị na-akwaga UK ma nweela ụgbọ ala gị ihe karịrị ọnwa isii ka ị na-ebi na mpụga UK ihe karịrị ọnwa iri na abụọ, ị nwere ike ibubata ụtụ ụgbọ ala n'efu site na iji HMRC Transfer of Residency atụmatụ.
Ọ bụrụ na ịzụrụ ụgbọ ala na EU wee bubata ya na UK, ị ga-akwụ 20% VAT mbubata ma ọ bụrụ na ọ na-erubeghị afọ 30, yana 5% VAT ma ọ bụrụ na ọ gafere afọ 30. A na-agbakọ nke a na akwụkwọ ọnụahịa ịzụrụ ihe yana ụgwọ njem ọ bụla na UK.
Nwere ike inyere aka n'ịkwagharị ụgbọ m?
N'agbanyeghị ebe ụgbọ gị nọ, anyị nwere obi ike na anyị nwere ike ịnye usoro nchekwa na nchekwa maka ibuga ụgbọ gị.
Ma anyị na-ebugharị ụgbọ ma ọ bụ na-eji gwongworo n'ime ụgbọ ala, anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ ntanetị nwere ike inyere aka na usoro nke ịbịnye ụgbọ ala gị na United Kingdom.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji họrọ anyị ka ịbubata ụgbọ gị site na EU TO UK?
Dika anyi na-acho ndi ahia anyi ka anyi nweta nke anyi Akaụntụ DVLA nke Akaụntụ M, ka ị na-agafe ule a, enwere ike ịnabata ndebanye aha karịa ụzọ ndị ọzọ.
Site na ibugharị ụgbọ gị site na nyocha na ndebanye aha - anyị na-elekọta ihe niile. Naanị ihe fọdụrụ bụ ịkwado efere nọmba UK ọhụrụ gị ma anyị wee kwadebe ụgbọ ala maka mkpokọta ma ọ bụ nnyefe na ebe ị họọrọ.
Usoro dị mfe, dabara adaba nke ahaziri maka ọtụtụ afọ, ibubata ụgbọ ala site na Europe na UK enweghị ike ịdị mfe. Iji mee ihe ị chọrọ ma chọpụta ihe ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị taa na + 44 (0) 1332 81 0442.
Anyị na-ebubata ụgbọ ala si EU?
EU mejupụtara nnukwu ụgbọ ala mbubata na United Kingdom, agbanyeghị enwere ọtụtụ mbubata si n'akụkụ ụwa niile anyị na-enyere aka kwa ọnwa.
Anyị na-enyere aka na ị na-ebufe ndị bi na Australia na-akwaga United Kingdom, na ọbụna ndị mmadụ n'otu n'otu na-ebubata ụgbọ ala mara mma site na United States of America.
Enweghị ebe anyị na-enweghị ike ibubata ma debanye aha ụgbọ site na ya, egbula oge ịbanye ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ dị n'èzí EU.
Kedu ụdị ụgbọ ala anyị na-arụ ọrụ?
Site na otu ugbo ala na-emepụta ụgbọ elu ruo nde nde paụnd anyị enyerela aka ịdebanye aha ọtụtụ ụgbọ ala dị iche iche. Tozọ e si edebanye aha dị iche maka ụgbọ ala ọ bụla mana anyị nwere obi ike na anyị nwere ike inye aka.
Zọ kachasị mma iji mara nke bụ eziokwu bụ dejupụta akwụkwọ arịrịọ anyị na-enye anyị nkọwa niile anyị kwesịrị ịmara iji nye gị ọnụego ziri ezi.
Anyị enwere ike ijikwa ụgbọ gị? Ma ọ bụ na anyị na-enye ihe mgbakwunye nhọrọ ọ bụla?
N'adịghị ka ndị asọmpi anyị, anyị nwere obi ụtọ karịa ịrụ ọrụ ọ bụla maka ụgbọ ala ndị na-etinye oge ha n'ụlọ anyị. Anyị na-eche na ịrụzi ụgbọ gị bụ ihe dị mma ịme mgbe ụgbọ ala na-etinye oge dị ukwuu na-abaghị uru.
Anyị na-enyekwa ndị ọkachamara ịkọwapụta iji mee ka ụgbọ ala gị dị ọhụrụ na nke ahụ trac gosiri ọkwa nke nwere ike iweta mkpuchi gị n'ozuzu aha.
Mbubata Ugbo ala m nwere obi uto banyere iwetu ugbo ala ma anyi nwere olile anya na aririo obula i nwere ike ime, anyi g’emezu.
Need kwesịrị iweta ụgbọala anyị na ogige anyị?
Dabere na afọ nke ụgbọala anyị nwere ike ọ gaghịdị achọ ka ọ bịa n'ụlọ anyị. Ọ bụrụ na ụgbọala ahụ karịrị afọ iri n'ọtụtụ ọnọdụ, ịnwere ike ime mgbanwe ahụ na ebe a na-adọba ụgbọala nke chọrọ maka nnabata.
Anyị na-elekọtazi ihe ọ bụla edepụtara n’aha gị. Ọ na-azọpụta oge ma ọ pụtara na ụgbọ gị agaghị enwe ike ịbịa ebe a.
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị dabara adaba maka ndebanye aha dịpụrụ adịpụ, mgbe ahụ anyị ga-eme ka ị mara mgbe ị dejupụtara mpempe akwụkwọ maka nkwupụta.
Gini bu iwu na ibubata ugbo ala gi nwa oge?
Ọ bụrụ na ị naghị ezube ibi na United Kingdom ruo ogologo oge, ma ụgbọ ala ahụ adịla na EU mgbe ahụ ị nwere ike iji efere mba ofesi gị na-enweghị ịdenye aha ma ọ bụ ụtụ ụgbọ gị na UK.
A ga-ekwe ka nke a ma ọ bụrụ na ị na-eleta naanị United Kingdom na ị naghị ezube ibi ebe a. Maka obibi obibi ọ bụla - a ga-achọ ndebanye ụgbọ gị.
Mustgbọ ala ahụ ga-edebanye aha, n'ụtụ, na mkpuchi na mba mbido. Emeghị nke ahụ nwere ike ibute okwu ma ọ bụrụ na enwee ihe ọghọm.
Vehiclegbọ gị nwere ike ibi naanị na United Kingdom maka ọnwa isii. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ maka ọbịbịa dị mkpirikpi karịa oge iri na abụọ ka a na-anabata.
Ọ bụrụ n’ikpebie ịdebe ụgbọ ala gị na United Kingdom ruo oge karịrị nke ahụ, biko egbula oge ịkpọtụrụ gị maka ndebanye aha.
Achọrọ m ịkwọ ụgbọ ala m ebe ọ na-edebanye aha ya?
Maka ihe ka ọtụtụ n'ụgbọ ala ndị na-achọghị nyocha nke IVA, anyị ekwesịghị ịnwe ụgbọ ala EU maka oge ọ bụla. Anyị achọpụtala na ndị ahịa na-agbago ụgbọ ala ha na United Kingdom ma na-achọ ngbanwe ha maka nnabata. Ọ bụrụ n’ị na-ebugharị n’elu efere ndebanye ndebanye yana mkpuchi gị na-ekpuchi gị, mgbe ahụ, anyị nwere ike ịkwado ụgbọ ala gị maka ‘ndebanye aha otu ụbọchị’
Na-eburu ụgbọ ala gị na ogige anyị na Castle Donington ma anyị nwere ike ibido mgbanwe ahụ iji mee ka ụgbọ gị na-ekwenye maka United Kingdom ebe ị na-eche. A na-ewere ya maka ule MOT iji hụ na ụgbọala ahụ kwesịrị ụzọ ma ọ bụrụ na enweghị nsogbu ị ga-enye gị akwụkwọ ikike MOT.
Ozugbo anyị nwere akwụkwọ MOT gị, ịnwere ike iburu ụgbọ ala ahụ, na mbadamba ndebanye aha gị si mba ọzọ. Anyị ga-edozi ngwa ndebanye aha na nnọchite gị na mgbe a natara nọmba ndebanye aha gị ọhụrụ ndị mba ọzọ nwere ike gbanwere maka ndebanye ndebanye aha GB anyị zigara gị.
Ọ bụ ụzọ dị mfe ịdenye ụgbọ ala EU gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị nọ n'ihu, ị gaghị enwe ike ịbanye na ogige anyị ma ụgbọ ala gị adịla na United Kingdom, anyị nwekwara ike inye aka na ndebanye aha nke ụgbọala ahụ ma enwere ike ịrụ ọrụ ahụ na ebe a na-arụzi ụgbọala. na ọrụ achọrọ.
Zọ kachasị mma iji chọpụta ụzọ esi edebanye aha bụ nkwupụta. Ọ ga-edepụta ihe dị mkpa iji denye aha mbubata EU gị na United Kingdom.